swordfish | Myanmar Mp3 Album
Author Archives: swordfish
ဘာဘူ – ဘာကြိုက် (The New Album)
ဘာဘူ – ဘာကြိုက် (The New Album) ၀၁။ Hip Hop ပွဲတော် ၀၂။ ဘယ်မှာထားမှာလဲ ၀၃။ မင်းသိရင်ပြီးတာပဲ ၀၄။ ဘာကြိုက် ၀၅။ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ ၀၆။ ဒါမျိုးတွေကြိုက်တယ် ၀၇။ ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ ၀၈။ ပိုင်ရှင် Mediafire credit to axeltkw.blogspot.com
June 2, 2011 swordfish ဘာဘူ အဆိုတော် (ကျား) New Myanmar Albums2Comments
လှိုင်ဦးမော် ၊ မနော – လက်ချောင်းများ
လှိုင်ဦးမော် ၊ မနော – လက်ချောင်းများ ၀၁။ ရက်ရက်ရောရော – မနော ၀၂။ စွယ်တော်ရွက် – မနော ၀၃။ အခုတော့ – လှိုင်ဦးမော် ၀၄။ တစ်ခြမ်းပဲ့ည – မနော ၀၅။ အမောပြေလေး – မနော ၀၆။ အမှတ်တရကျောင်းတော် – မနော ၀၇။ ဂျူလိုင် – မနော ၀၈။ ဒဏ်ခတ်ခြင်းလား – လှိုင်ဦးမော် ၀၉။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ – မနော ၁၀။ ရှော့တွေရှော့တွေ – မနော ၁၁။ အလွမ်းများမပေးပါနဲ့ – မနော ၁၂။ သေချာတယ် – မနော ၁၃။ နင့်လက်မှာ … Continue Reading →
June 2, 2011 swordfish Media Leaveacomment
အယ်ဒီကျော် – သတ္တုခေတ်အလွန်
အယ်ဒီကျော် – သတ္တုခေတ်အလွန် (၂၀၁၁) ၀၁. အပေါစားအချစ် ၀၂. အဆိုးမြင်သမား ၀၃. တစ်ကပြန်စမယ် ၀၄. အိပ်မက်မီးရထား ၀၅. ဇတ်မျှောကြီးမကချင်ပါ ၀၆. အခါလွန်နေ့စွဲများ ၀၇. အန္ဒလူသား …ငါ ၀၈. ဘာကြောင့်များ ၀၉. အကောင်းဆုံး ၁၀. မင်းတစ်ယောက်စာ Click credit to axeltkw.blogspot.com
June 2, 2011 swordfish အဆိုတော် (ကျား) အယ်ဒီကျော် 1 Comment
Htoo Eain Thin Discography
Discography of Htoo Eain Thin All Credit go to www.htooeainthin.com http://mmcybermedia.com http://axeltkw.blogspot.com rfanque , bakaba , balagyi2007 , mgthura3 www.shwemyanmar.net ထူးအိမ်သင် – နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ (၁၉၈၇) ၀၁။ မေ့လိုက်တော့ ၀၂။ ရက်စက်စွာ ပြုံးတတ်သော ၀၃။ ခွင့်မပြု ၀၄။ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ ၀၅။ စိတ်ဓာတ်ကင်ဆာ ၀၆။ တစ်နေ့နေ့တော့ ချစ်လာလိမ့်မည် ၀၇။ ကြိုက်သလို လုပ် ၀၈။ မရိုးသားတော့ဘူး ၀၉။ ဆွေးပြီ ၁၀။ သီချင်းလေး သက်သေ ၁၁။ သူငယ်ချင်းအတွက် ၁၂။ ဝေးသွားတဲ့ အခါ ၁၃။ … Continue Reading →
March 30, 2011 swordfish ထူးအိမ်သင် 1 Comment
All credit goes to www.mmcybermedia.com & Rfanquee/JoneSein / tayluulin / Laypyae / axlerose ၁. တူးတူး (အဆင်သင့်ပဲဟေ့) ၀၁ မင်းမရှိရင် ၀၂ အဆင်သင့်ပဲဟေ့ ၀၃ အတိတ်မြက်ခင်းစိမ်းများသို့ အလွမ်း ၀၄ အမုန်းမျက်လုံး ၀၅ လမ်းခွဲမှာမျက်ရည်သုတ်မယ် ၀၆ ချိုမြိန်ဒုက္ခ ၀၇ မုန်းချင်မုန်းလိုက် ၀၈ မင်းကလေးအချိန်တွေဖြုန်း ၀၉ အချစ်ပုံပြင် ၁၀ ကံ့ကော်ပွင့်ထက်အိပ်စက်ခြင်း ၁၁ မေမြို့ မိုးသည်းည ၁၂ နေ၀န်းနီပေါ် ထွက်ပြီ ၁၃ အရှိ ၁၄ ရင်ခုန်သံကိုစတေးခဲ့တယ် ၁၅ ရယ်စရာများဖြစ်နေပြီလား ၁၆ နှလုံးသားခေါင်းလောင်းသံ http://www.mediafire.com/?08acg165vr6quyk ၂. တူးတူး (မိဆိုး) … Continue Reading →
March 29, 2011 swordfish တူးတူး 1 Comment
စည်သူလွင် + သျှီ – မာကျူရီအလင်းတန်း
စည်သူလွင် + သျှီ – မာကျူရီအလင်းတန်း သော်ဒီဝေ ၏ အကောင်းဆုံးတေးများ 2001 ၀၁ သျှီ – မင်းသာအချစ်ဆုံးမင်းသာနောက်ဆုံး ၀၂ စည်သူလွင် – ငြိမ်း၍မရသောမီး ၀၃ သျှီ – လမ်းပြပါဦး ၀၄ စည်သူလွင် – ဘယ်သူ့ကိုလဲ ၀၅ သျှီ – ခါး ၀၆ စည်သူလွင် – အချစ်မဲ့လူသားတစ်ဦး ၀၇ သျှီ – အတောင်ပံများနှင့် ၀၈ စည်သူလွင် – ရောခ့်အင်ရိုးနတ်သမီး ၀၉ သျှီ – တောအလည်ပြောမယ် ၁၀ စည်သူလွင် – မရည်ရွယ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ် ၁၁ သျှီ – တို့နှစ်ဦးသား ၁၂ စည်သူလွင် … Continue Reading →
March 7, 2011 swordfish စည်သူလွင် သျှီ 1 Comment
ရာဇာဝင်းတင့် – နွဲ့ဆိုး
New Version ၀၁ နွဲ့ဆိုး ၀၂ ရက်ကန်းသံ ၀၃ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ၀၄ မေ ၀၅ ပုဇွန်ဆိတ်ကလေး ၀၆ သံသရာတစ်ကွေ့ဝယ် ၀၇ ချစ်မယ်ဆိုပန်းပန်ပါ ၀၈ မိုး ၀၉ ချစ်အားမညီ ၁၀ ဧရာဝတီ http://www.mediafire.com/?d7064s5ceh6k24i credit to www.mmcybermedia.com @ axlerose
March 7, 2011 swordfish ရာဇာဝင်းတင့် 1 Comment